ဒီည... | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရင်တွင်းဖြစ်တည်မှု... » ဒီည...
အခြား ကဗျာ, ရင်တွင်းဖြစ်တည်မှု...
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 5:31 PM
Posted by မိုးသက် at 5:31 PM Read more
၀ိဝိ February 19, 2013 at 5:48 PM
တစ်ခါထဲ အိပ်မပျော်သွားပါနဲ့ ဦးဗျာ အစ်ကိုရေ....................
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် February 19, 2013 at 7:40 PM
ညီလေးရေ လက်စွမ်းထက်လှချေလား ။ ရင်ဘတ်ထဲက ခံစားချက်တွေ ပေါ်လွင်တယ်
Thu February 19, 2013 at 8:03 PM
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) February 20, 2013 at 4:51 AM
ဖွဲ့နွဲ့သီကုံးသွားတဲ့ စကားလုံးလေးတွေကြောင့် ကဗျာ ပြောင်မြောက်လှတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ လင်ဒ့်တက်မလာဘူးဗျ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ မသိဘူး အခုတောင် သူများဘလောဒ့်ထဲမှာ တွေ့လိုက်လို့ ရောက်ခဲ့ရတာ။
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 20, 2013 at 4:57 AM
ရင်ထဲ တကယ်ကိုထိရှခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ....
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 21, 2013 at 11:05 AM
အဲ့ဒီ ည တွေထဲမှ
မိုးညချမ်း February 21, 2013 at 5:30 PM
ကဗျာက ဝါကျတိုလေးတွေနဲ့ ထိရောက်တယ် မောင်လေးရေ ... အင်း!!!!! သက်ပြင်းနဲ့ သက်မတွေကြား ဒီညတော့ အိပ်ပျက်ခြင်းတွေနဲ့ မိုးလင်းမှေ့ာပဲ ...
hninnse young February 21, 2013 at 7:05 PM
Candy February 22, 2013 at 7:17 AM
wowwww ငါ့မောင် မိုက်လှချည်လား...
ကဗျာလေး မိုက်တယ် တိုးးးးးးး တက်လာတယ် ငါ့မောင် :D
မေမြို့မိုး February 22, 2013 at 3:04 PM
စံပယ်ချို February 22, 2013 at 10:42 PM
အင်းလေ...... တယောက်ထဲသမားတွေဆိုတော့လဲ အလွမ်းတွေ ကျောခင်းရပြီပေါ့
အိမ်မက်စေရာ February 24, 2013 at 2:48 PM
ကဗျာလေးကောင်းတယ်..စိတ်တော့မကောင်းဘူး..ငါ့မောင်တစ်ယောက်ထဲ လွမ်းချင်းတွေတိုးနေတယ်ထင်တယ်..ကဗျာဆိုတာ ရင်ထဲက လာတာမို့ ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်းနေသလား လို့..
ရွှေအိမ်စည် March 1, 2013 at 2:19 AM
မရှိ. မရှိ တဲ့သူကို တမ်းတ နေမိတဲ့ည..
ကိုယ့်ရင်ကိုယ် သပ်ချ နေရတဲ့ည.
Nwai La March 9, 2013 at 8:51 AM
သြော် ... ဟုတ်သားပဲ
အစ်ကိုလည်း ဒီကဗျာလေးကို အမြတ်ထုတ်ထုဆစ်ထားတာပဲ
ဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော့်ကို ပြောပြသွားပါတယ်